အယျလျခမာနဲ့ ပှဲစဉျမှ ခွစှေမျးဆိုးရှားလှနျးတဲ့ ယူနိုကျတကျ ကစားသမား တဈဦးကို ဝဖေနျထိုးနှကျခဲ့ကွတဲ့ အိုဝငျနှဈဦး - SPORTS MYANMAR
အယျလျခမာနဲ့ ပှဲစဉျမှ ခွစှေမျးဆိုးရှားလှနျးတဲ့ ယူနိုကျတကျ ကစားသမား တဈဦးကို ဝဖေနျထိုးနှကျခဲ့ကွတဲ့ အိုဝငျနှဈဦး
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ မနေ့ ညက အဇေကျ အယျလျခမာ အသငျး နဲ့ ယူရို ပါလိဂျ အုပျစု ဒုတိယ ပှဲစဉျ အဖွဈ အဝေးကှငျး ကို သှားရောကျ ကစား ခဲ့ပွီး ဂိုး မရှိ သရေ ရလဒျ နဲ့သာ လှညျ့ပွနျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ အပွီး မှာတော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ ကစားသမား ဟောငျး နှဈဦး ဖွဈကွ တဲ့ မိုကျကယျ အိုဝငျ နဲ့ အိုဝငျ ဟားဂရဗျေ့ တို့က အသငျး ဟောငျးရဲ့ ကှငျးလယျ ကစားသမား ဖွဈတဲ့ ဘရာဇီသား ဖရကျဒျ ကို ဝိုငျးဝနျး ထိုးနှကျ သှားခဲ့ လိုကျကွ ပါတယျ ။
ယူနိုကျတကျ တို့ စိတျပကျြဖှယျ ရလဒျ ထှကျပျေါ ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာတော့ ဘရာဇီးသားဟာ ဘောလုံး ပေးပို့ မှု အမှားတှေ မြားစှာ ကြူးလှနျ ထားခဲ့ သလို အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈပိုငျး အတှကျ ဘယျလို မှ ထူးခွား ကောငျးမှနျ တဲ့ အရာ တှကေို မလုပျဆောငျ နိုငျခဲ့ ပါဘူး ။
ဒါ့ကွောငျ့ BT Sport ရဲ့ သတငျး သုံးသပျ သူတှေ ဖွဈကွ တဲ့ မိုကျကယျ အိုဝငျ နဲ့ အိုဝငျ ဟားဂရဗျေ့ တို့ဟာ ပှဲ ကစား ဖို့ အခှငျ့ အရေး ရရှိ ခဲ့တုနျး စိတျပကျြဖှယျ ခွစှေမျး ပွသ ခဲ့တဲ့ ဖရကျဒျ အပျေါ နားလညျ ခှငျ့လှတျ ပေးလိုစိတျ ကုနျဆုံး နခေဲ့ ကွတာ ပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
” ခငျဗြား အသငျး တဈသငျး အတှကျ ဘယျ နရော မှာ ကစား နလေဲ ဆိုတာ ကို ခန မထေ့ား လိုကျပါ ။ ဘယျလို နရော မြိုးမှာ ပဲ ကစား နေ ပါစေ ၊ သူ ဒီနေ့ လုပျဆောငျ ခဲ့ သလောကျ ဘောလုံး ပေးပို့ မှု အမှား တှကေို လုပျဆောငျ နိုငျ စရာ အကွောငျး မရှိ ပါဘူး ”
” ကြှနျတျော တို့က သူဟာ ကစားသမား ကောငျး ဆိုတာ သိရှိ ကွ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူ ဘာလို့ ဒီလောကျ အထိ ဆိုးရှား နေ သလဲ ဆိုတာ နားမလညျ နိုငျကွ ပါဘူး ။ ရှကျတာ မှာ တုနျးက သူဟာ ကွောကျမကျဖှယျ ကောငျးတဲ့ ပှဲစဉျ တှကေို ပိုငျဆိုငျ ထားခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါ့ကွောငျ့ လညျး မနျစီးတီး အသငျး ကတောငျ စိတျဝငျစား ခဲ့တာ ပါ ”
” ဒါပမေယျ့ ဒီနေ့ ပှဲစဉျ မှာတော့ သူ့ ဆီမှာ ရှိသငျ့ တဲ့ အဆငျ့ အတနျး တဈခု ကို မမွငျ တှခေဲ့ ရ ပါဘူး ။ သူဟာ ဘောလုံး ကိုငျ ကစား တာ ကောငျးမှနျ ပါတယျ ။ သူဟာ အစှမျး အစ ရှိတဲ့ ခွထေောကျ နှဈခြောငျး ကို ပိုငျဆိုငျ ထား ပါတယျ ။ ဒီနေ့ သူ အခှငျ့အရေး ရရှိ ခွငျးနဲ့ အတူ ခွစှေမျးကောငျး ပွသ နိုငျခဲ့ သငျ့တယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူ လုပျသှားတာ ပွောငျးပွနျ ခညျြး ပါပဲ ” လို့ ဟားဂရဗျေ့ က ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါကို မိုကျကယျ အိုဝငျ ကလညျး ဖရကျဒျ က သူ့ရဲ့ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျရညျ တှကေို ပွသ နိုငျမယျ့ နရော တဈခု ဟာ ဘယျ နရော လဲ ဆိုတာ တောငျ မသိနိုငျ သေးတဲ့ သူ တဈဦး ပဲ ဖွဈကွောငျး ၊ သူဟာ အလယျအလတျ တနျးစား ကစားသမား တဈဦး သာ ဖွဈကွောငျး ဝဖေနျ သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” သူဟာ အလယျအလတျ တနျးစား ကစားသမား တဈဦး ပါပဲ ။ ဟုတျတယျ မလား ? ဒါဟာ အောကျ အထိ ထိုးကြ နတေဲ့ ခွစှေမျး ပါပဲ ။ ခငျဗြား ရော ဘယျလို ပွောခငျြ သလဲ ? ဘယျ နရော က သူ့ရဲ့ အကောငျးဆုံး နရော လဲ ? ကြှနျတျော က6လို့ ထငျတယျ ။ ဟားဂရဗျေ့ က 8 လို့ ထငျတယျ ”
” အဲ့ဒီလို ငွငျးခုံ နပွေီ ဆို ကတညျးက ဒီ ကစားသမား ဘယျမှာ ပိုကောငျးလဲ ဆိုတဲ့ အဖွေ မရှိဘူး ဆိုတာ သိသာ ပျေါလှငျ ပါတယျ ။ သူဟာ ဘယျ နရော မှာမှ ပို ကောငျးအောငျ မလုပျနိုငျ ပါဘူး ။ သူလေ … ပေါငျ သနျး 50 လောကျ ပေးခဲ့ ရတယျ မလား ? ” လို့ မိုကျကယျ အိုဝငျ က ထိုးနှကျ သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
အယ်လ်ခမာနဲ့ ပွဲစဉ်မှ ခြေစွမ်းဆိုးရွားလွန်းတဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမား တစ်ဦးကို ဝေဖန်ထိုးနှက်ခဲ့ကြတဲ့ အိုဝင်နှစ်ဦး
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ မနေ့ ညက အေဇက် အယ်လ်ခမာ အသင်း နဲ့ ယူရို ပါလိဂ် အုပ်စု ဒုတိယ ပွဲစဉ် အဖြစ် အဝေးကွင်း ကို သွားရောက် ကစား ခဲ့ပြီး ဂိုး မရှိ သရေ ရလဒ် နဲ့သာ လှည့်ပြန် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် အပြီး မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ကစားသမား ဟောင်း နှစ်ဦး ဖြစ်ကြ တဲ့ မိုက်ကယ် အိုဝင် နဲ့ အိုဝင် ဟားဂရေ့ဗ် တို့က အသင်း ဟောင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဖြစ်တဲ့ ဘရာဇီသား ဖရက်ဒ် ကို ဝိုင်းဝန်း ထိုးနှက် သွားခဲ့ လိုက်ကြ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် တို့ စိတ်ပျက်ဖွယ် ရလဒ် ထွက်ပေါ် ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာတော့ ဘရာဇီးသားဟာ ဘောလုံး ပေးပို့ မှု အမှားတွေ များစွာ ကျူးလွန် ထားခဲ့ သလို အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်း အတွက် ဘယ်လို မှ ထူးခြား ကောင်းမွန် တဲ့ အရာ တွေကို မလုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။
ဒါ့ကြောင့် BT Sport ရဲ့ သတင်း သုံးသပ် သူတွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ မိုက်ကယ် အိုဝင် နဲ့ အိုဝင် ဟားဂရေ့ဗ် တို့ဟာ ပွဲ ကစား ဖို့ အခွင့် အရေး ရရှိ ခဲ့တုန်း စိတ်ပျက်ဖွယ် ခြေစွမ်း ပြသ ခဲ့တဲ့ ဖရက်ဒ် အပေါ် နားလည် ခွင့်လွှတ် ပေးလိုစိတ် ကုန်ဆုံး နေခဲ့ ကြတာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
” ခင်ဗျား အသင်း တစ်သင်း အတွက် ဘယ် နေရာ မှာ ကစား နေလဲ ဆိုတာ ကို ခန မေ့ထား လိုက်ပါ ။ ဘယ်လို နေရာ မျိုးမှာ ပဲ ကစား နေ ပါစေ ၊ သူ ဒီနေ့ လုပ်ဆောင် ခဲ့ သလောက် ဘောလုံး ပေးပို့ မှု အမှား တွေကို လုပ်ဆောင် နိုင် စရာ အကြောင်း မရှိ ပါဘူး ”
” ကျွန်တော် တို့က သူဟာ ကစားသမား ကောင်း ဆိုတာ သိရှိ ကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ ဘာလို့ ဒီလောက် အထိ ဆိုးရွား နေ သလဲ ဆိုတာ နားမလည် နိုင်ကြ ပါဘူး ။ ရှက်တာ မှာ တုန်းက သူဟာ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ပွဲစဉ် တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် လည်း မန်စီးတီး အသင်း ကတောင် စိတ်ဝင်စား ခဲ့တာ ပါ ”
” ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာတော့ သူ့ ဆီမှာ ရှိသင့် တဲ့ အဆင့် အတန်း တစ်ခု ကို မမြင် တွေ့ခဲ့ ရ ပါဘူး ။ သူဟာ ဘောလုံး ကိုင် ကစား တာ ကောင်းမွန် ပါတယ် ။ သူဟာ အစွမ်း အစ ရှိတဲ့ ခြေထောက် နှစ်ချောင်း ကို ပိုင်ဆိုင် ထား ပါတယ် ။ ဒီနေ့ သူ အခွင့်အရေး ရရှိ ခြင်းနဲ့ အတူ ခြေစွမ်းကောင်း ပြသ နိုင်ခဲ့ သင့်တယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ လုပ်သွားတာ ပြောင်းပြန် ချည်း ပါပဲ ” လို့ ဟားဂရေ့ဗ် က ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကို မိုက်ကယ် အိုဝင် ကလည်း ဖရက်ဒ် က သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည် တွေကို ပြသ နိုင်မယ့် နေရာ တစ်ခု ဟာ ဘယ် နေရာ လဲ ဆိုတာ တောင် မသိနိုင် သေးတဲ့ သူ တစ်ဦး ပဲ ဖြစ်ကြောင်း ၊ သူဟာ အလယ်အလတ် တန်းစား ကစားသမား တစ်ဦး သာ ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန် သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” သူဟာ အလယ်အလတ် တန်းစား ကစားသမား တစ်ဦး ပါပဲ ။ ဟုတ်တယ် မလား ? ဒါဟာ အောက် အထိ ထိုးကျ နေတဲ့ ခြေစွမ်း ပါပဲ ။ ခင်ဗျား ရော ဘယ်လို ပြောချင် သလဲ ? ဘယ် နေရာ က သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး နေရာ လဲ ? ကျွန်တော် က6လို့ ထင်တယ် ။ ဟားဂရေ့ဗ် က 8 လို့ ထင်တယ် ”
” အဲ့ဒီလို ငြင်းခုံ နေပြီ ဆို ကတည်းက ဒီ ကစားသမား ဘယ်မှာ ပိုကောင်းလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေ မရှိဘူး ဆိုတာ သိသာ ပေါ်လွင် ပါတယ် ။ သူဟာ ဘယ် နေရာ မှာမှ ပို ကောင်းအောင် မလုပ်နိုင် ပါဘူး ။ သူလေ … ပေါင် သန်း 50 လောက် ပေးခဲ့ ရတယ် မလား ? ” လို့ မိုက်ကယ် အိုဝင် က ထိုးနှက် သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။